Somalia online: Sarkaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo caawa fiidkii lagu dilay Muqdisho
Sarkaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo caawa fiidkii lagu dilay Muqdisho
Arbaco, May ,31, 2017 (HOL) - Wararka naga soo gaaraya degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii toogasho lagu dilay sarkaal ka tirsan qaybta caafimaadka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in sarkaalka la dilay lagu magacaabi jiray G/sare Cabdullaahi Cilmi Nuur, waxaana la sheegayaa in dablaydii dishay ay baxsadeen.
Sarkaalka la dilay ayaa la sheegay in uu ahaa madaxa gaadiidka gurmadka deg degga ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Dilkan ayaa imanaya ayada oo ciidamada dowladda ay dhowaan sare u qaadeen howlgallada amni ee magaalada caasimadda ah, xilli laga cabsi qabo in Al-shabaab ay sare u qaadaan weeraradooda, inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Kenya faces wheat shortage as North Rift farmers r...
Live: NASA announces first ever mission to sun
Bomb scare forces Malaysian Airlines plane to turn...
New on Pornhub: Corruption allegations video that ...
Disgraced surgeon Ian Paterson jailed for 15 years...
Liverpool deaths: Three bodies found in John Lenno...
Madaxweyne Farmaajo oo u magacaabay Fahad Yaasiin ...
Sarkaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo caawa...
Daawo Sawirro: Al-shabaab oo soo bandhigay sawirad...
Mid ka mid ah dowladaha Carabta oo si cad uga hor ...
Wasiir Beyle oo manta saxaafada uga warbixiyey 60-...
Xaaladda Barakacayaasha kunool duleedka Muqdisho o...
Qarax Miino oo khasaare geystay oo ka dhacay Gobol...
Indonesian Muslim preacher named as porn case susp...
Teenager dumped unconscious in wheelie bin
Iska hor-imaad Muqdisho ku dhexmaray Ciidan kawada...
Modi’s cow slaughter ban to be challenged
Maxaa ka jira in Fahad Yaasiin loo magacaabi rabo ...
Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo ku heshi...
Xiisad ka dhalatay howl gal hub ka dhigis ah oo ka...
Daawo Sawirada: Diyaaradii kusoo dhacday Garoonka ...
Banaan bax laga hor dhigay afaafka hore ee Safaara...
A 500-year-old Quran in golden letters
Dubai Municipality scotches plastic rice rumours
Panic as UAE money exchange owner absconds
Russian explorers find 'swamp' of Soviet money
Moscow storm: 11 killed as high winds strike Russi...
New port boosts Djibouti’s dream to be maritime hu...
General election 2017: Polls and latest odds track...
China's 'toilet revolution' targets dirty lavatori...
Man, 35, shot dead in front of son, 3, in Sainsbur...
Musharax Doorashada dalka Kenya oo loo haysto damb...
Caqabado soo wajahay howlgalo hub ka dhigis ah oo ...
Ciidanka Kenya oo xasuuqay Geel boqol Neef ka bada...
Akhriso Magacada iyo Qabiilada Gudoomiyaasha Cusub...